ညီလင်းသစ်: အဖြူအမည်း စိန်ခေါ်ပွဲ (၅)
Posted by ညီလင်းသစ် au 1.12.14
Thazin Phoo said...
Have read all B&W posts.
I like all. My favourite is no: 4.
အံမယ်... ဒီတစ်ခါ ဘီးကုပ်ကို ဖျောက်ထားပါလား။ :P
ဇွန့်အကြိုက်ဆုံးကိုပြောရရင်တော့ ဒုတိယပုံပဲ။ :)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်... ဖြူမည်းစိန်ခေါ်ပွဲကို မျက်နှာစာအုပ်မှာ ၅ရက်တိတိ ၀င်ရောက်ဆင်နွှဲပေးတဲ့အပြင် ဘလော့ဂ်မှာပါ ထပ်ပြီး တင်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
By the way... Wish you haveaSweet December and Happy Anniversary as well! :))
မထင်မှတ်ပဲ တီတင့်တို့ရဲ့ အဖြူ အမဲ စိန်ခေါ်ပွဲလေးဟာ မောင်ညီလင်းအတွက် ထူးထူးခြားခြား ပို့စ် ၅ပုဒ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်းလေးအဖြစ် ခြေရာကျန်ခဲ့သလို တီတင့်တို့အတွက်လဲ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ ကိုယ်ထင်မပြခဲ့သူ ကိုယ်ထင်ပြခဲ့တာမို့ ထူးခြားမှုတစ်ရပ်ပေါ့ကွယ်။ တီတင့်နဲ့ဆုံဘူးတဲ့အတွက် မှတ်ချက်ပြုရရင်ဖြင့် အပြင်မှာပိုနုပိုငယ်ရွယ်ပြီး ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ ရင့်ကျက်တယ်လို့ ပြောပါရစေ။
Is that you, Ko Nyi Linn Thit? :D
Ma Thazin Phoo…
Thank you for your kind visits to all these B&W posts! :)
မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ ပျောက်သွားတာ…၊း) ဇွန်က မျက်မှန် ၅ ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံပွဲကို ကြိုက်တာကိုး…၊ Sweet December to you, too sis! :)
ဟုတ်ပါတယ်၊ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ၅ ရက်ဆက်တိုက်ပါပဲ၊း) အင်း… ရှေ့နှစ် ပြန်လာတဲ့အခါ တီတင့်ကို မုန့်အဝ လိုက်ကျွေးမှ ဖြစ်တော့မယ်…။း)
Sis Myat Kyi,
Who do you think it is? :D :D
အဟမ်း... အဟမ်း.... :D :D :D
ပို့စ်တွေကို ငါးရက်ဆက်တိုက်တင်ဖြစ်သွားစေတာဟာလည်း ထူးခြားဖြစ်စဉ်ပါပဲအစ်ကို အမှတ်တရဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လား ဓါတ်ပုံ စာသား ဖဘ ဘလော့...အားလုံးစုံသွားတယ်...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ညီမတို့ရဲ့ B&W စိန်ခေါ်ပွဲကို ပါဝင်ဆင်နွှဲပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်...း)
အလဲ့…One Direction အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ကေ နဲ့ ပါလား…=)
အကြိုက်ဆုံးက နံပါတ်၃ ပုံပါ